Aya ndiwo marongero achaitwa HomePod muIOS 11 | IPhone nhau
Zvisinei nekuti chinotevera chigadzirwa chitsva cheApple hachizowanikwe kuti utenge kusvika kupera kwegore, ruzivo irwo rwuri kutipa nezve iyo nyowani iPhone 8 nedzimwe nhau dzeApple dziri kukosha kwazvo. Asi ikozvino yave nguva yekuziva zvakawanda nezve iyo HomePod, mutauri akangwara wekambani, kubva kwatiri kwatinoziva maitiro ekugadzirisa yekutenda kumwechete kuIOS 11 iyo yatove ichizviisa mune yayo kodhi.
Iyo intuitive yekumisikidza, yakafanana chaizvo neiyo maAirPods, ayo anozopedzisira agadzirira chishandiso kuti chiishandise kuburikidza nemirairo yezwi zvichingodaro. kukwanisa kuziva nhau dzezuva, kudzora zvishandiso zveKeKeKit uye, zvechokwadi, teerera kumimhanzi. Isu tinokuratidza iwo matanho anozofanirwa kutorwa kumisikidza kubva kune iyo iPhone.
Sezvatakataura, maitiro ekugadzirisa akafanana chaizvo neayo eAirPods, iine hwindo rinozoonekwa pachiratidziro che iPhone yedu kana rikaona kuti isina kusimbiswa HomePod iri padyo nesu. Kutevera rairo dzinoonekwa muhwindo iro, setup mutauri ichave yakatwasuka uye yakapusa. Tinofanira kusarudza mutauro watinoda kuve naSiri (zvisingawanzoitika kuti haushandise mutauro mumwe chete watinayo pane yedu iPhone) uye pinda manhamba ekupedzisira mana eiyo HomePod serial nhamba. Chekupedzisira, tinogona kushandisa kumisikidzwa kwe iPhone yedu kuitira kuti HomePod igadziriswe otomatiki, pasina kuisa data senge mapassword eWiFi, account yeApple uye nezvimwe, chimwe chinhu chinotoitika kana uchigadzirisa mamwe madhiraivhu kubva kune imwe yatove kushanda.
Pakupedzisira iyo HomePod inoda kuziva kuti ichaiswa muimba ipi uye mune ipi imba. Izvi zvinoenderana neKeKKit uye neApp app, sezvo mutauri weApple achizoshanda senzvimbo yekudzora yeKeKit. Kana iko kuita kwapera, inogona kushandiswa nemirairo yezwi kuteerera mimhanzi, seta alarm, chengetedza ako anowirirana neKeKit uye uzive nhau dzezuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Aya ndiwo marongero achaitwa HomePod muIOS 11
Zvinoenderana neongororo yeStatista, 26% yevashandisi ve samartwatch muUS vanoshandisa iyo kufona